Phone Your Android waa la dumiyey, ama la xado, nasiib darro oo dhan aad dabin xog muhiim ah ku yaal? Dareen qaracan ku saabsan? Haddii aadan haysan in. Halkii, si fudud dib waxaad ka heli kartaa xogta oo dhan ilaa inta aad abid xoojiyaa telefoonka aad Android inay PC ama daruur. Maqaalkani waxa uu ku siinayaa hanuun buuxda oo ku saabsan sida loo raad raac Android barnaamijyadooda, xiriirada, fariimaha, sawiro, abuse wac, music, video iyo in ka badan.
Qaybta 1. kaabta xogta Android inay PC mid mid gacanta Qaybta 2. All-in-mid kaabta Android inay PC
Qaybta 1. kaabta xogta Android mid mid gacanta
1. xiriirada Android kaabta iyo kalandar
Waa fud in ay xiriir gurmad on Android. Waxaad si fudud sidaas samayn kara adiga by. Just u tag Xiriirada app iyo dhoofin oo dhan xiriirada in kaarka SD. Markaas, isticmaali cable USB ah in ay xiriir Android gurmad si PC. Haddii telefoonka aad Android awood u aad u hagaagsan account Google, si aad u Settings> Accounts & hagaagsan u tegi kartaa xiriirada iyo kalandar gurmad on Android inay account Google. Ama, haddii aad jeceshahay in aad isticmaasho qalabka xisbiga saddexaad, waxaad isku dayi kartaa Wondershare MobileGo for Android. Halkan waxaa ku qoran saddex siyaabood in gurmad xiriirada Android talaabo talaabo ah .
2. kaabta Android SMS
Si ka duwan xiriirada gurmad, gurmad SMS Android soo baxday in ay yara adag. Waa inaydaan samayn kartaa adiga kuu gaar ah. Halkii, waxaad u leedahay in ay ku tiirsan yihiin qaar ka mid ah qalabka xisbiga saddexaad, sida + kaabta SMS, kaabta SMS & Soo Celinta, Wondershare MobileGo for Android, iwm Halkan, waxaan ku tusi aad ugu fiican 3 Android barnaamijyadooda gurmad SMS si ay kuu caawiyaan fariimaha SMS Android gurmad iyo MMS effortlessly.
3. audio Android kaabta iyo video
Si audio ee kaabta iyo video ka Android, waxaad isku dayi kartaa habka dhaqanka. Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan telefoonka aad Android inay PC. Phone Your Android la dejin doonaa sida disk drive ka saarida. Dul in this disk drive ka saarida oo la furo. Raadi galka magacaabay Music, Video, ama wax u eg in. Jiid iyo iyaga hoos u aad PC u gurmad.
4. photos Android kaabta
Waxay jecel yihiin inay sawiro aad smartphone Android qaadan? Si kastaba ha ahaatee, ma ahan ammaan si ay halkaas ka tago sawiro. Waxaad tirtirto laga yaabaa in sawiro kac ahayn. Taa ka sii daran, sawiro aad u tiro badan qabsan doonaan meel aad u badan. Xaaladdan oo kale ah, oo aad jeceshahay waxaa laga yaabaa in ay sawiro Android gurmad. Halkan waa Hanuun tallaabo-tallaabo ku saabsan sida loo sawiro camera gurmad iyo sawiro laga keeno si computer iyo Google + .
Qaybta 2. All-in-mid kaabta Android inay PC
Hel ka daaleen gurmad mid xogta Android ay ka mid oo raadinaya qaar ka mid ah si ay gurmad wax walba waqti? Waxaad u timid inaad meel sax ah. Qaybta soo socda idin tusiyo 4 jid oo sahlan in ay gurmad Android inay PC. Just on akhri dooro mid aad jeceshahay oo isku day ka dib.
1. kaabta oo dhan fayl telefoonka Android inay PC
Dhab ahaantii, sidan waa in aad nuqul buuxa oo ah kaarka SD Android ah oo gurmad ah in ay PC. By isticmaalaya habkan, aad awoodo gurmad audio, sawiro, video, waraaqaha iyo barnaamijyadooda. Haddii aad dhoofiyo oo dhan xiriirada Android inay card SD, waxaad kaloo sameyn kartaa xiriirada gurmad.
Fiiro gaar ah: In sidan, xogta app app iyo dhaawac waxa laga yaabaa.
Mid ka mid ah click in gurmad dhammaan dadka ay khuseyso, SMS, barnaamijyadooda, audio, video, sawiro, abuse call iyo jadwalka.
Xulo marka gurmad SMS, video, app, xiriirada, music, sawiro, document files.
Soo Celinta aad Android kaga imaanayo file aan ka kaaftoomi kasta.
Wareejinta xogta u dhexeeya Android iyo macruufka si xor ah.
Si fiican u shaqeeyaan HTC, Samsung, Sony, LG, Motorola, Huawei, ZTE, Google.
Tallaabada 1. Ka telefoonka aad Android xiran
Connect telefoonka aad Android inay kombiyuutarka adigoo isticmaalaya cable USB ah. Markaas ordi barnaamijka iyo dooran kaabta Your Phone uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada 2. Hal-guji Android gurmad si PC
Marka aad telefoonka la ogaado, waxaad arki doontaa suuqa kala hoose. Laga soo bilaabo uu furmo suuqa, waxaad si fudud u heli karaan in software waxa aad ogolaanaysaa xiriirada gurmad, fariimaha, sawiro, jadwalka taariikhda, abuse wac, music, video, iyo barnaamijyadooda. Waxaad uncheck karaa content kasta oo aadan rabin in gurmad. Markaas, riix Start Copy .
By default, file gurmad badbaadi doonaa D: \_ Documents \_ Wondershare \_ MobileGo \_ kaabta. Waxa kale oo aad ka bedeli kartaa waddada badbaadin iyo kaydka faylka gurmad in meel kasta oo aad jeceshahay.
3. SyncDroid: gurmad kale Android inay software PC
Dhab ahaantii, SyncDroid uu leeyahay laba nooc, mid waa u Windows PC, kan kale waa qalabka Android. Labada qeybood oo aad u ogolaato in ay gurmad SMS, xiriirada, abuse wac, audio, video, sawiro ku camera iyo kaarka SD iyo browser bookmark ah. Ayaa gurmad version Android phone aad Android inay card SD ama DropBox.
Raac tutorial ku saabsan sida loo raad raac Android inay PC:
Tallaabada 1. Isku telefoonka aad Android inay PC iyo dejisan iyo rakibi version Windows ee SyncDroid on PC.
Tallaabada 2. Marka xiran, telefoonka aad Android la soo bandhigi doonaa bidixda ee suuqa hoose.
3. Riix Tallaabada kaabta tab. Markaas, qaybaha file xusho oo aad rabto in aad gurmad.
Tallaabada 4. magac gala faylka gurmad iyo inuu arinkaa qaar ka mid ah oo ku saabsan gurmad ah haddii aad rabto.
Tallaabada 5. Click kaabta . SyncDroid bilaabo inuu gurmad telefoonka aad Android. Markii uu dhamaystay, guji Finish ama kaabta Open aad u argto faylka gurmad ah.
Guda call ee kaabta
Browser bookmark kaabta
App ee kaabta iyo app xogta
Xogta Xulo gurmad
La shaqee computer Mac ah
> Resource > Windows > A Guide Full on Sida loo Phone Android kaabta in PC